လိုးရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ–အခမဲ့ Xxx ဂိမ်းများတြန္း
ရင်ဆိုင်လိုက်ရအောင်! လိုးကြီးမားသောဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်မဖြစ်သင့်တုန်လှုပ်ခြင်းအားဖြင့်အရွယ်အစား၏အွန်လိုင်းအသိုင်းအလိုးကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့ဟာသိပြီးသားလူကြိုက်များအ။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊လိုးကားအထွက်မှာမွေးဖွားတြန္းဆိုရင်ခင်ဗျားအနေနဲ့ otaku၊ဤလတ်ဆတ်သောဆိုက်ဖန်တီးလိုက်တဲ့လိမ့်မည်သင်အကြိုက်ဆုံးအပေါ်နေရာ။ ငါတို့သည်အားလုံးအကောင်းဆုံးအလိုးအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းအပေါ်၊သငျသညျအရေးယူဖို့သုံးနိုင်တယ်ကြောင့်ယခုဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်ကူးရှိစေခြင်းငှါ။ တချိန်တည်းမှာ၊ကျွန်တော်အကြံပြုပါသည်ထဲကလိုးဂိမ်းများသူတွေကိုကြည့်မတြန္းဘူး။ သောကြောင့်၊ကျနော်တို့အများကြီးပိုပြီးအပြင်တြန္းလိင်ဂိမ်း parodies အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း။, ကျနော်တို့ဂိမ်းပုံစံအားလုံးရဲ့အဓိကအမျိုးထွက်ရှိ၊ခြားနားချက်နှင့်အတူအားလုံးဇာတ်ကောင်တွေအတွက်ဒီဇိုင်းအတွက်အလိုး။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊ကျနော်တို့အလိုအဆိုဒ်မြှောက်သောအရည်အသွေး၏ဤလောကအတွက်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစား။ ဒါကြောင့်၊ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့သာတင် HTML၅ ဂိမ်းများဤစုဆောင်းခြင်းအတွက်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်အများကြီးပျော်စရာကစားဤဂိမ်းကြောင့်သူတို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်နှင့်အင်ဂျင်တွင်ဤလတ်ဆတ်တဲ့ဂိမ်းများလိမ့်မည်သင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုအတွေ့အကြုံအများကြီးပိုပြီးရှိုင်းထက်အၾကည့္ရႈသည္လိုးကားကြည့်ခြင်း၊ဂန္ထဝင်ညမ်းရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်ကစားဟောင်းမီးေလိင်ဂိမ်းများ။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်အားလုံးသည်ဤအအမာခံညစ်ညမ်းဂိမ်းများအပေါ်တစ်ဦးအထိအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းနှင့်အတူကြွလာသည့်အပေါငျးတို့အင်္ဂါရပ်များအတွက်လိုအပ်တဲ့ပျော်စရာအချိန်များ၏ရှေ့မှောက်၌။, မရှိပါဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်အရစ်ကျတွင်ပါဝင်ပတ်သက်၊သင်သည်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်မှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်နှင့်သင်ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ဘာမှမ။ ကျနော်တို့နေတဲ့အကြီးမားဆုံးလိုးကားဂိမ်းကမ်းလှမ်းကြောင်း၎င်း၏အခမဲ့စုဆောင်းပြီးပရိသတ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏မွေ့လျော်သောသူတို့ကိုနေ့တိုင်း။ တဦးတည်းကသူတို့ကို၏!
အခါ crated ဒီဆိုက်၊ကျွန်တော်သိခဲ့အတိအကျအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုအဝေး။ အဲဒီလိုမတူကွဲပြားမှုကြောင့်ကျနော်တို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအများကြီးအတွေ့အကြုံ၏ဤလောကအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ္း၊ကျွန်တော်သိခဲ့အတိအကျဘယ်မှာသူတို့ကိုမှစ။ ကျနော်တို့ဂိမ်းများထံမှအမျိုးမျိုးသောသည္ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်၊ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုများဆီသို့ဦးတည်ရှိသမျှကိုသေားမှာရှာတွေ့လိမ့်မည်။
အကြောင်းပြောနေတာအဖြစ်သေားတွေ့နိုင်ပါသည်ဤစုဆောင်းခြင်းအတွက်၊သင်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အများအပြားစိတ်ကူးယဉ်စေလိမ့်မည်ဟုသင်ပည္ဆိုင္ရာခက်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနေစဉ်။ ကြားလူကြိုက်အများဆုံးသူများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မိသားစုလိင်စွန့်စား၊ကိုယ့်အကြိုက်အပေါ်အခြားမည်သည့်။ ဒါပေမယ့်အမှု၏အလိုးဂိမ်းများ၊မိသားစုအဆောများမှာစိတ်ကူးယဉ်လောက်အများအားဖြင့်ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးများလိုသူမင်းသူတို့ရဲ့အစ်ကိုဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖေဖေ။, တချိန်တည်းမှာ၊သင်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်အချို့သောစာမျက်နှာများစိတ်ကူးယဉ်၊ဒါပေမဲ့ကတည်းကကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာကာတြန္းကမာၻ၊အဆိုပါဂိမ်းအားလုံးအကြောင်းမဲ့ခံရမိန်းကလေးငယ်အားသဂိုဏ်းအကြောအမျိုးသားများအားဖြင့်သို့မဟုတ် tentacle မကောင်းဆိုးဝါးသူအောင်သူတို့ကိုအော်ဟစ်။ မှကြွလာသောအခါ fetishes၊သင်အရာအားလုံးခံစားနိုငျကနေခြေနှင့်ကိုယ်ဝန်သေားအရှက်နှင့်ပင်အချို့အဓမ္မအခန်းကဏ္ဍကိုကစား။
ပြီးတော့ကျနော်တို့ဘက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ရဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ otaku။ ဒီဂိမ်းရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူကြွလာတြန္းရော်အရေးယူည့္ဒီအားလုံးနာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်ကနေတြန္းစီးရီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖက်တွင်ငါတို့သည်သင်တို့ဂိမ်းနှင့်အတူအားလုံးအပင်တြန္းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ညဦး၊နဂါး၊သို့မဟုတ်သင်္ဘောလသည်၊နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသည်တြန္း parodiesေဖစ္ေစႏိုင္သည္၊အပိုင်း၊သတ်လသတ်ပစ်ပြီးဤမျှလောက်များစွာသောမူရင်းဂျပန်ပုံပြင်။
အစုအကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်အပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကိုအည့္ဒီသာဂိမ်းသို့မဟုတ်အသစ်ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်း remastered ကိုက်ညီဖို့အရည်အသွေးနှင့်လုံြစံသတ်မှတ်ငါတို့၏ဆိုက်ကို၏။ ကျနော်တို့သာအားကစားပြိုင်ပွဲလက်ခံထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာကစားနိုင်ပါတယ်တိုက်ရိုက်အမှာမည်သည့်စက်ကိရိယာ၊နှင့်ကျွန်တော်စမ်းသပ်ဒီမီတင်မှာသူတို့ကိုငါတို့ဆာဗာများ။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်နဲ့တူတယ်လို့ခံစားမိစေပါလိမ့်မယ်အဆိုပါအရေးယူမှန်၊မဟုတ်ကြောင့် ၃D renditions။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာလိုးကားနှင့်ငယ်၊မင့္ကားဇာတ်ကောင်။ သို့သော်ထိုခံစားချက်များ၏လက်တွေ့ဘဝမှကြွလာသောအရူပဗေဒနှင့်အင်ဂျင်လှုပ်ရှားမှုအတွက်။, အာရုံစိုက်ဖို့အသေးစိတ်အချက်ဟာလည်းကွဲပြားသည်။ သင်မြင်ရကြလိမ့်မည်သူတို့အားကြီးမားတဲ့တြန္းမျက်စိလုံးဝမထုတ္ကုန္ပမ်က္ရည္ေအခါသင်မင်းသူတို့၏လည်ချောင်းအခါမိန်းကလေးများရတဲ့အကြော၊သူတို့ရဲ့ pussies ရစိုစွတ်သောနှင့်၎င်းတို့၏နို့သီးခေါင်းရလိမ့်မည်။ တချိန်တည်းမှာပင်၊ဂိမ်းအလာနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသံ။ သင်ကခံစားရပါလိမ့်မယ်၊ကိုယ့်သင်တို့ကဲ့သို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ဂျပန်ညမ်းသောအခါထိုမိန်းကလေးသည်ဤဂိမ်းစတင်လာလိမ့်မည်ညည်းတွားခြင်းနှင့်အော်ဟစ်အတွက်အမြင့်ဆုံးအဆောက်လေသံအတိုင်းသင်ရထားသူတို့ရဲ့ pussies နှင့် asses နောက်ကွယ်မှ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အည့္ဒီသင်လိုအပ်သမျှအဘို့အတစ်ပျော်စရာအချိန်အပေါ်။ ကျွန်တော်တို့မှာဆီတစ်ခုရှိ၏အများဆုံးဖွင့်နေ့စွဲပလက်ဖောင်းအတွက်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့လိုးရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲစု၊ငါတို့သည်လည်းအများကြီးပဳႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်း၌သင်တို့အဘို့အမှု၏စက္ကန့်၊မှကျေးဇူးတင်စကားအများအပြားအမျိုးအစားနဲ့ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်။ သင်သည်လည်းစာသားဖတ်၏ဖော်ပြချက်ကိုသိဖို့အဘယ်အရေးယူအကြောင်းစတင်ခင်မှာ။ တစ်ချိန်ကအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်အဘယျသို့ဂိမ်းဆော့ကစားရန်၊ထိုသို့ကိုယ့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါဟာဝန်တက်ဗ်အသစ်တစ်ခုထဲတွင်၊ဒါပေမယ့်အသစ်အကျဉ်းနေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုဒ်များ။, ကုန်တင်အချိန်ထက်လျော့နည်းတစ်မိနစ်တစ်ရာဝန်တက်လုံးဝသင်ကကစားနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူမရှိပါဆော့ဖ်ဝဲအားနည်းချက်များသို့မဟုတ်နောက်ကျပြီး၊သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်လျှင်ပင်ထဲကနေအဆက်ဖြုတ်အင်တာနက်ကို။ ခံစားအခမဲ့လိုးဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ည!